गोविन्द केसीलाई अदालतको प्रश्नः हजुरलाई कुनै मानसिक रोग छ कि ?
गोविन्द केसीलाई अदालतको प्रश्नः हजुरलाई कुनै मानसिक रोग छ कि ?
साझा अनलाईन २०७४ पौष २५ गते मा प्रकाशित 107 पटक पढिएको
२५ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार डा. गोविन्द केसीको वयान लिएको छ । १४ वटा प्रश्न समेटिएको वयानको पूर्ण पाठ सो वयानमा डा. केसीले अदालततको अवहेलना आफूले गरेको नभई प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नै गरेको र उनीमाथि कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।
डा. केसीले आफ्नो वयानमा भनेका छन्- ‘निजबाटै अदालतको अवहेलना भएकाले निजउपर अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुनुपर्ने हो । म उपर लगाएको आरोप झुठ्ठा हो । मैले अदालतको अवहेलना गरेको छैन । निज सम्माननीय प्रधानन्ययाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायिक छानविनको दायरामा ल्याई कारवाही गरी न्यायालयको गरिमाको वृद्धि हुन्छ । अदालत जनताको आस्थाको केन्द्र बन्छ ।’
अदालतले डा. केसीलाई उनको शारीरिक र मानसिक अवस्थाका बारेमा पनि प्रश्न सोधेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा लिएको डा. केसीको वयानका क्रममा चलेको सवाल जवाफयस्तो छः